‘विनिमय दरको परिवर्तन अर्थतन्त्रलाई घातक’ - BBC News नेपाली
‘विनिमय दरको परिवर्तन अर्थतन्त्रलाई घातक’
सञ्जय ढकाल बीबीसी नेपाली सेवा, काठमाण्डू
Image caption निर्यात बढाउन नेपाली रुपियाँ भारुसंग अवमूल्यन गरिनुपर्ने तर्क अघि सारिएको छ
खर्बौं रुपियाँको व्यापार घाटा बेहोरिरहेको समयमा निर्यात बढाउनको लागि नेपालले भारतीय रुपियाँसंगको आफ्नो विनिमय दर अवमूल्यन गराउनु पर्ने चर्चा केहि समय यता निकै गर्मागर्मी रुपमा चलिरहेको छ।
तर अधिकांश अर्थविदहरुले भने अवमूल्यन गर्दा फाइदा भन्दा घाटा धेरै हुने चेतावनी दिएका छन्।
नेपालमा अहिले देखिएजस्तो भुक्तानी सन्तुलनको समस्या पच्चीस वर्ष अगाडि देखिएको थियो।
त्यतिबेलाको मिश्रित भनिने अर्थतन्त्रमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर बीस करोड रुपियाँभन्दा कममा झरेपछि तत्कालीन सरकारले केहि सीप नलागेर १०० भारुको मूल्य १४२ नेपाली रुपियाँबाट बढाएर १७० पुर्‍याएको अनुभव त्यतिबेलाका राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु अहिले सम्झन्छन्।
त्यसपछि लागेको महंगीको झट्का र आर्थिक अन्योलता बेहोरेका ती अधिकारीहरु करीब अढाई खर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्राको संचय रहेको अहिलेको बेला विनिमय दरको परिवर्तनबारे सोच्न समेत नहुने बताउँछन्।
विनिमय दर घटाउनु पर्ने तर्क गर्नेहरु भन्छन् यसो गरेमा नेपाली मालमत्ता विदेशीको लागि सस्ता हुन्छन् र तिनको निर्यात बढ्छ।
तर सस्तो पार्दैमा नेपाली वस्तुको निर्यात बढाउन सकिने तर्कलाई आत्मरतिको संज्ञा दिनेहरुपनि कम छैनन्।
पहिले त हाम्रा कुन त्यस्ता वस्तु छन् जुन महंगो भएको कारण निर्यात हुन नसकेका हुन्? त्यस्तो त छैन। अनि अवमूल्यन गरेर मात्र कहाँ हुन्छ?
डा तिलक रावल, पूर्व गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकका पूर्व अधिकारी तथा हाल अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार केशव आचार्य तिनै मध्येका एकजना हुन्।
“अवमूल्यन गरेर मात्रै निर्यात बढाउँछु भन्नु बेकारको कुरा हो। उदाहरणका लागि केहि गरी जेसी पेनी, वालमार्ट जस्ता ठूला आयातकर्ताले हामीसंग तुरुन्तै तीन करोड थान लुगा मगाए भने हामीले दिन सक्दैनौ। बिजुली छैन, बाटो छैन, हाम्रा प्रक्रिया लम्बेतान छन्, सस्तो भएर मात्र उत्पादन बढ्न सक्दैन,” उनले भने।
निर्यात गर्न सकिने वस्तुहरुनै नेपालसंग धेरै नभएको हुनाले, विदेशीको लागि नेपाली वस्तुको भाउ सस्तो भएपनि खास निर्यात बढ्न नसक्ने कतिपय अर्थविदहरुको भनाई छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा तिलक रावल भन्छन्, “पहिले त हाम्रा कुन त्यस्ता वस्तु छन् जुन महंगो भएको कारण निर्यात हुन नसकेका हुन्? त्यस्तो त छैन। अनि अवमूल्यन गरेर मात्र कहाँ हुन्छ?”
अर्थतन्त्रका डरलाग्दा तथ्यांकहरु
भुक्तानी सन्तुलनको घाटा - १७ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ
कुल वस्तु आयात - ३०९ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ
कुल वस्तु निर्यात - ५० अर्ब २० करोड रुपियाँ
वस्तु व्यापार घाटा - २५९ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ
(स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मको विवरण)
कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये दुई तिहाई भारतसंग हुने हुनाले नेपालले आफ्नो मुद्राको भारुसंग स्थिर विनिमय दर तोकेको छ जसको आधारमा अमेरिकि डलरसंगको भाउ निर्धारण हुन्छ।
त्यसैले भारुसंग नेपाली रुपियाँको भाउ अवमूल्यन गरिने हो भने नेपाली वस्तु विदेशीको लागि सस्तो हुने मात्र होइन विदेशी वस्तु नेपालीको निम्ति महंगो हुने प्रष्ट छ।
खानेकुरा देखि पेट्रोलसम्म विदेशी आयातमा भर पर्ने नेपालीहरुको निम्ति त्यो महंगी निकै पीडादायक बन्न सक्छ।
विगतको अनुभव कोट्याउँदै केशव आचार्यले भने, “१७ वर्ष अगाडि हामीले भारुसंग नेपाली रुपियाँको करीब बीस प्रतिशत अवमूल्यन गरेका थियौं। परिणाम के भयो भने केही वर्षसम्म इतिहासकै धेरै २२ प्रतिशत महंगी बढ्यो।”
गएको ६ महिनामा मन्त्री देखि गभर्नर सम्मले भारु सित नेपाली रुपियाँ अवमूल्यन गर्नुपर्ने संकेत नगरेका होइनन् तर लगत्तै उनीहरुले आफ्ना भनाई सच्च्याए।
एक महिना अगाडि बेलायतबाट निस्कने एउटा पत्रिकासंगको कुराकानीमा गभर्नर डा युवराज खतिवडाले नेपाली रुपियाँको अवमूल्यन हुन सक्ने आशय व्यक्त गरेपछि बैंकहरुमा भारु अभाव चर्किएको थियो।
Image caption केन्द्रिय बैंकले आर्थिक स्थायित्व भयो भने मात्र अवमूल्यनबारे सोच्न सकिने बताएको छ
तर गभर्नरले त्यसो नभनेको स्पष्टिकरण राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गोपाल काफ्लेले दिएका छन्।
“मुद्रा अवमूल्यन गर्ने हाम्रो कुनै सोच छैन। गभर्नरको आशय के मात्र थियो भने यदि राजनीतिक स्थिरता भयो भने, अर्थव्यवस्था तथा मुद्रामा बढि विश्वसनीयता भयो भने, मुद्रा स्फिति घट्यो भने तथा वचत बढ्यो भने - त्यस्तो सुविधाजनक स्थितिमा, त्यो पनि केहि वर्ष पछाडि, विनिमय दर परिवर्तन गर्ने कुरा विचारणीय हुन सक्छ,” काफ्लेले बताए।
नेपाली रुपियाँ अवमूल्यन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क दिनेहरुले समेत त्यसको लागि पूर्वशर्त चाहिन्छ भनेका छन्।
ती पूर्वशर्तहरु पालना नहुँदै अवमूल्यन गरीएमा चाहिं अर्थतन्त्र घातक चक्रव्यूहमा फँस्ने कुरामा अधिकांश विज्ञहरु एकमत छन्।
अझ उनीहरु त बेला न कुबेला यस्ता चर्चा चल्नुले मात्रपनि आर्थिक स्थायित्व डगमगाउने चेतावनी दिन्छन्।